Usuku lwenkonzo | Martech Zone
NgoMvulo, nge-15 kaJanuwari, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ndivile ezindabeni namhlanje ukuba inkosikazi kaGqirha Martin Luther King unqwenela ukuba olu suku lube lusuku lwenkonzo. Kukho isigqebelo kumyalezo njengoko ndibhala le posi ivela kwi-Starbuck's. Nalu usuku lwam namhlanje:
Intombi yam ifike ekhaya phezolo ndinomkhuhlane esiwongileyo kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo. Ibibusuku nobusuku benkonzo kaTata nobhuti! Utata ubalekela ekhemesti efuna izinto ezingaphezulu, ubhuti ucoca ubumdaka xa udade engakwazanga abaleke aye kwindlu yangasese ngexesha. Iqondo lobushushu lakhe lakhuphuka ngokwaneleyo kangangokuba ndatsalela uGqirha, owathi mandilinde ngaphandle. Ndazi ukuba sisengxakini, nangona kunjalo, xa ndangena egumbini lakhe kwaye wayexhuma-xhuma esihla emandlalweni, ethandabuza. Simthulisile saphinda salala. Yitsho umthandazo-ujonge ukuba bubusuku obude ngokuhlwanje.
Kwangelo xesha, i-DSL yam yathatha isigqibo sokuthatha inkunkuma emva kweminyaka emi-4 yokuqina kokuqina kwamatye. Ke andinazo iifowuni ezingaphantsi kwe-8 nge-AT & T, undwendwelo oluvela kwi-1 'line' technician, kwaye ngomso ndinetekhnoloji ye 'DSL' ezayo. Isiqendu sihlekisa kwaphela. Kudala ndikhangela i-imeyile nge-PDA kangangeentsuku ezi-2 kwaye andikwazi ukwenza nantoni na. Ngexesha lam lokulala kwentombi yam ndiza kuvusa ingqondo.
Ke, ukongeza phezulu, bendineefowuni ezingapheliyo ezivela kubantu abafuna uncedo namhlanje. Khange ndikwazi ukunceda nabani na ngenxa yokuba i-DSL yam iphantsi. Ndibalekile ke okwemizuzu embalwa ngokuhlwanje, ndishiya unyana wam ephethe kunye nentombi yam ilele, ukunazisa nonke ukuba ndikhonza kangangoko ndinako kwaye ndiyathemba ukubuya online, kokubini ngokwasemzimbeni nangokobuchwephesha, kwiintsuku ezimbalwa.
UNksk. King, ndiyazi ukuba ubunenye into engqondweni xa ubuthetha ngenkonzo… kodwa ndiyazi ukuba uyakuqonda ukuba ndenza konke okusemandleni am ngoku. 🙂
Inqaku elinye leendaba ezimnandi namhlanje, ndidwelisiwe kwiiBlogi eziPhezulu zeNtengiso ezi-150 zikaTodd ezidityanisiweyo… Okwangoku # 80!
Enkosi, Todd! I-algorithm emnandi kunye nendlela yokubeka inqanaba!
I-WordPress: Yakha iphepha lasekhaya ngamanyathelo ama-3 alula
I-AT & T Indiphoxile Kule mpelaveki, kodwa Abasebenzi babo ABAKHO
UTony D. Clark
Jan 15, 2007 ngo-9: 51 PM
Hee Doug-Mntu, loluphi usuku- ezam iingcinga zikuwe kunye nosapho lwakho.
Jan 16, 2007 ngo-1: 36 PM
UDoug, ndiyathemba ukuba intombi yakho iziva ngcono!